8 × 29 I-Podcast: Lixesha leMac | Ndisuka mac
Safika ke Iveki enye ukuya kwi #podcastapple ngeendaba zamva nje kule meko kubasebenzisi beMac. Inkampani ngokwayo ibhengeze izolo emva kwemini ukuba iiMacs ziya kuba nendawo yazo kulo nyaka kwaye kunyaka olandelayo siza kuba neMac Pro entsha eya kuba nomdla kakhulu kubasebenzisi abaziingcali, kunye nezinto ezinokukhulisa icandelo. Ukongeza kwezi ndaba zimnandi zexesha elide, bakwazisa ngesaphulelo kwixabiso leemodeli zangoku, ukufika kwe-iMac entsha kulo nyaka, ukubuyela ekwenziweni kweliso labo nakwi-Mac mini ... Konke oku kuninzi Okuninzi yile sithethe ngako kwiPodcast ngale ntsasa kwaye unokufumana kuyo umjelo wethu we-iTunes ukumamela xa ufuna njani kwaye njani.
Kodwa ayisiyiyo yonke ipodcast egxile kwiiMacs, sikwathethile kancinci malunga nokuqaliswa kweSamsung Samsung S8, uhlaziyo lwe-iOS nokunye okuninzi. Ngokucacileyo sishiya ividiyo ebukhoma erekhodwe ngobu busuku kwisiteshi sethu seYouTube Yonke iApple:
Kwaye khumbula ukuba ukuba ufuna ukwabelana nge-podcast yakho nosapho lwakho, abahlobo, abamelwane, oqhelene nabo kunye nabanye, siyayixabisa. Njengesiqhelo, yabelana nawe ngejelo le-iTunes elifikelelekayo ukusuka kwifayile ye- ikhonkco elandelayo kwaye apho uya kufumana zonke iipodcast. Unokusilandela nakwiinethiwekhi zentlalo kwaye wabelane ngezimvo zakho, imibuzo okanye iingcebiso nangaliphi na ixesha, ezi zamkelekile liqela lePodcastApple. Khumbula ukuba ungasebenzisa kwakhona i-hashtag #podcastapple kwi-Twitter Ukongeza kwezinye iitshaneli, iinethiwekhi zokunxibelelana ukuze zikwazi ukunxibelelana nathi. Kule veki izayo siza kubuya kunye nePodcast entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-8 × 29 IPodcast: Ixesha likaMac selifikile